electric Sam | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! electric Sam | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ọhịa themed oghere egwuregwu na sinik ịma mma nke okike na lush green osisi, electric Sam bụ egwuregwu ị ga-n'anya. Gịnị na-eme nke bụ isiokwu nke ezigbo ego n'etinye welcome bonus game pụrụ iche bụ electrifying aka ka egwuregwu. Ị ga-enwe na-egbuke egbuke ọkụ ọ bụla ebe dị n'oké ọhịa gburugburu a osisi na nnukwu ọnụ ụzọ a alaeze. Nke a bụ ndabere ntọlite ​​na i nwere ike ele n'azụ-esi anwụde kwa. E nwere a jungle kwaa music na-eme ka egwuregwu na ihe fun na ụtọ. Iji Wager na egwuregwu a, ị nwere ike họrọ mkpụrụ ego uru malite 10p na kacha nke na-aga ruo £ 100 a atụ ogho. The ise-esi anwụde egwuregwu a na-enye ike na-emeri 243 dị iche iche ihe n'ịgwa nke akara.
Banyere Mmepụta nke Electric Sam
Nke a bụ ezigbo ego n'etinye welcome bonus game kere elk, a aha na-abia mgbe ọ na-abịa elu tech oghere Ịgba Cha Cha ahụmahụ. N'ime afọ ole na ole nke ha inception na 2012, ha kere ụfọdụ na-ewu ewu egwuregwu na na onye na ndị top iri-eduga cha cha egwuregwu suppliers.
The nnọchianya nke a ezigbo ego n'etinye welcome bonus game bụ Sam, queen Sandra nwunye ya na eze Maggie, nwa-ya nwayi. Sam bụ n'elu na-akwụ ụgwọ ihe nnọchianya nke a egwuregwu ebe i nwere ike imeri ruo 300 ugboro na nzọ gị mgbe ise nke a na ụdị na-egosi na-esi anwụde. The ọzọ na akara bụ nọmba 7 na-acha uhie uhie na mkpụrụ osisi na akara nke lemons, plums, iberi nke anyụ na cherị. The mkpụrụ akara nwere a Neon-egbukepụ egbukepụ ndepụta na anya mara jazzy. Ha na-akwụ gị 40x ọ bụla mgbe 7 akwụ 80x na ise nke a na ụdị mmeri. The ọzọ na akara enyere gị aka imeri bonuses bụ a ọlaedo mgbịrịgba na egwuregwu logo.
Wild Njirimara: The egwuregwu logo bụ anụ feature ebe a na ọ na-anọchi niile isi na akara. Wild ebe a anaghị ekpuchi maka mgbịrịgba bonus. Ọ na-egosi na niile ise-esi anwụde-enyere gị aka ka enwekwukwa n'ịgwa.
Free spins: The nnọchianya nke ọlaedo mgbịrịgba bụ onye na-enyere gị na-enweta ụfọdụ free egwuregwu. Na atọ ma ọ bụ karịa nke ya na-esi anwụde, i nwere ike imeri ruo iri na ise free egwuregwu. Ndị a nwere ike re-triggered oge obula kwa.
electric emeso: Nke a bụ kwukwara ego nke a ezigbo ego n'etinye welcome bonus game. Ọ nwere ike triggered nanị n'oge free spins na akara enyere gị aka Ị kpọghee ekwt ya bụ Sam, Sandra na Maggie.
Dị iche iche na electrifying bonuses atụmatụ na-enyere gị aka imeri elu-uru ụgwọ ọrụ, ndị a ezigbo ego n'etinye welcome bonus game bụ ihe kasị mma na udi. Ọ nwere ihe RTP of 96.10%.
Sam na osimiri